NAT। समाधान "सोडियम क्लोराइड" नाक lavage बच्चाहरु को लागि
नाक धुने प्रक्रिया - rhinitis, sinusitis र sinusitis को उपचार को एक धेरै कुशल विधि। यो पनि नाक श्लेम लाग्एको झिल्ली को अवस्था पत्र मदत गर्छ सुनिंनु कम र सजिलो सास बनाउँछ। नुनखरा "सोडियम क्लोराइड" नाक lavage लागि सबैभन्दा कुशल र यसरी उपलब्ध साधन मध्ये एक मानिन्छ। तरल तखतालाई बन्द किनेको वा आफैलाई तयार गर्न सकिन्छ।
नुनखरा के हो?
NAT। समाधान - यो निश्चित अनुपात मा नुन र purified (distilled) पानी एक सरल मिश्रण छ: तरल को 200 एमएल पूरक आहार को2ग्राम लिन। नुन को यो एकाग्रता रगत प्लाज्मा यसको सामग्री पारस्परिक रहेको छ। "सोडियम क्लोराइड" (0.9%) lavage नाक गर्न थप हेरफेर रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
सोडियम क्लोराइड पानी मा सजिलै घुलनशील छन् जो सेतो क्रिस्टल छ। पदार्थ को प्लाज्मा र extracellular तरल पदार्थ मा स्थिर दबाव राख्छ।
गुण समाधान "सोडियम क्लोराइड"
कि बाहेक एक isotonic समाधान नसों र उपचर्म प्रशासन देखाइएको छ, र यो बाल व्यवहार मा प्रयोग गरिन्छ। तरल पदार्थ अक्सर को उपचार र रोकथाम को लागि निर्धारित छ नाक को रोगहरु। उत्पादन निम्न चिकित्सकीय गुण छ:
को mucosal सतह moisturizes;
कार्य disinfecting भइरहेको;
यो एक स्वस्थ microflora पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्छ;
को नाक गुहा र sinuses आसन्न मा खकार liquefies;
को नाक गुहा मा रोमक को समारोह दुरुस्त राखेको छ।
नाक को Overdried mucosa रोगजनकों कमजोर बन्नेछ। शरीर का प्राकृतिक प्रतिरक्षाको पुनर्स्थापना गर्न, NAT प्रयोग गर्नुहोस्। समाधान "सोडियम क्लोराइड" नाक lavage लागि। विशेषज्ञहरु एक उपचार रूपमा, तर पनि रोग अवस्थाको रोकथाम लागि मात्र होइन यो गरिरहेको सिफारिस गर्छौँ।
isotonic समाधान को लागि आवेदन सङ्केत गर्छ
निम्न अवस्थामा प्रयोग नाक lavage लागि "सोडियम क्लोराइड":
भाइरल rhinitis, संक्रामक वा जीवाणु मूल;
को नाक गुहा को पुरानो रोग;
तीव्र श्वसन pathologies र फ्लू को विकास रोकन;
mucosal सतह मइस्चराइजिंग।
शारीरिक नुनखरा समाधान (सोडियम क्लोराइड) को भडकाऊ प्रक्रिया मा vasoconstrictive को आवेदन एकदम सजिलो साँस र बाक्लो स्राव को expectoration को नाक sinuses देखि र गुहा नै सुधार थोपा को बाहुल्य कम गर्छ। धन वयस्क र सबै उमेरका छोराछोरीलाई दुवै प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कसरी प्रक्रिया को लागि तयार?
समाधान "सोडियम क्लोराइड" नाक lavage लागि फार्मेसी प्राप्त गर्न सिफारिस गरिएको छ। विभिन्न आकार को बोतल मा उपलब्ध मतलब: 100, 200 र 400 एमएल। क्षमता एक रबर डाट, को सिरिंज पियर्स र तरल सङ्कलन गर्नुपर्छ जो संग छाप। उपकरण पूर्णतया खुला सिफारिस गरिएको छैन। यस मामला मा, समाधान सबै लाभदायी गुण एक दिन गुमाउनु हुनेछ।
उपकरण पनि मात्रा एक उपचार को लागि पर्याप्त छ प्लास्टिक र ग्लास vials, मा उपलब्ध छ। तरल मा खोल्ने ग्लास microparticles प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ मा: घर मा ग्लास ampoules लागू गर्न राम्रो छ।
प्रक्रिया को लागि, तपाईं नरम टोंटी संग सानो चायदानी को रूप मा विशेष उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। खरिद गर्न यस्तो उपकरण फार्मेसी हुनुपर्छ। र समाधान इंजेक्शन एक ब्लोअर, को सिरिंज (सुई बिना) संग हुन सक्छ।
स्वतन्त्र समाधान तयारी
घर मा, तपाईं पनि खाना पकाउन सक्नुहुन्छ NAT। समाधान छ। सोडियम क्लोराइड (नाक lavage साधारण तालिका नुन लागि उपयुक्त) मनतातो पानीमा भंग गर्नुपर्छ। तालिका नुन समुद्री बदलिएको गर्न सकिन्छ।
तरल एकाग्रता 0.9% हुनुपर्छ। यो गर्न, नुन को एक चम्मच पानी एक लीटर मा पतला। यो क्रिस्टल को पूर्ण dissolution सम्म भरिएर पोखिन्छ। परिणामस्वरूप उपकरण वयस्क र बच्चाहरु दुवै लागि प्रयोग गरिन्छ।
नाक कसरी धुन बच्चा गर्न?
अनिवार्य बिहान प्रक्रियाहरु को एक जटिल को नाक शिशु बच्चा भाग Rinsing। को नाजुक mucosal सतह बिगार्न छैन ताकि हेरफेर धेरै ध्यान दिएर बाहिर गर्नुपर्छ। एक शिशु को नाक गुहा मा घनघोर तरल को एक ठूलो संख्या निषेधित छ। तपाईं समाधान प्रविष्ट गर्न एउटा सानो सिरिंज वा विंदुक प्रयोग गर्नुपर्छ।
बच्चाहरु नाक lavage लागि "सोडियम क्लोराइड" न्यानो हुनुपर्छ। प्रत्येक नथना मा नाक चूषण वा कपास flagellum मार्फत सफा नाक whereupon, नुनखरा तरल को 2-4 थोपा ड्रप पर्छ। प्रक्रिया उपचार को उद्देश्य संग बाहिर छ भने, यस्तो सफाई पछि आफ्नो डाक्टर निर्धारित ड्रिप लागूपदार्थ गर्न आवश्यक छ।
छोराछोरीको लागि तीन हेरफेर को वर्ष वयस्क जस्तै तरिकामा गरिन्छ। समाधान गर्ने नाक गुहा एक सिरिंज संग शुरू उपकरण वा बिस्तारै प्रयोग मा infused हुन सक्छ। यो गर्न, बच्चा डुब्नु नजिकै वा कचौरा भन्दा खडा गर्नुपर्छ। टाउको एक पक्ष र अलिकति खुला मुख गर्न ढल्केको गर्नुपर्छ। नुनखरा को नाक खण्डमा, माथि राखिएको छ जो प्रबन्ध छ, र यो अन्य नथना बाहिर प्रवाह हुनेछ। यो ध्वनि "र" आफ्नो मुख मा पानी रही बच्न भन्नुपर्छ। हेरफेर दोस्रो नथना लागि दोहोर्याइएको छ। को सफाई प्रक्रिया पछि कुनै पनि अतिरिक्त तरल पदार्थ बच्चा अवश्य बाहिर Blown पूरा भएको छ।
समाधान "सोडियम क्लोराइड" नाक lavage लागि भाइरल संक्रमण लड्न प्रभावकारी तरिका मानिन्छ। यो उपचार को सकारात्मक परिणाम प्राप्त रकम प्रयोग को नियम पालन गर्न आवश्यक छ। सबै को पहिलो तपाईं नाक गुहा शुद्ध गर्न नुनखरा को प्रयोगमा व्यावसायिक सल्लाह प्राप्त गर्न आवश्यक छ। धेरै डाक्टर जो स्टेराइल छैन, घर "एनालग" प्रयोग गरेर नगर्न गर्न सुझाव दिन्छौं।
प्रक्रिया रोग को अवधिमा, तर पनि निवारक उपाय रूपमा मात्र होइन बाहिर गर्नुपर्छ। समाधान नाक lavage लागि "सोडियम क्लोराइड" एक स्प्रे रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईं पनि नाक गुहा को सिंचाई को लागि उत्पादन खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। "Akvamaris" जस्ता उपकरण लागत, "Akvalor", "Marimer" एकदम एक isotonic समाधान को मूल्य भिन्न हुन्छ।
दबाइ 'Flomax'। समीक्षा। प्रयोगको लागि निर्देशन
तपाईं कुन snoring देखि औषधि पसल मा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ मतलब? डाक्टर र बिरामीको, उत्पादनहरु को विवरण को समीक्षा
Nurofen स्तनपान। प्रयोगको लागि निर्देशन, contraindications
"Clotrimazole" मलम - प्रयोगको लागि निर्देशन
के स्थायी हो: बनाउन-अप र बाल perming
कसरी खुट्टा पारित गर्न?
यो उल्लेखनीय चरा Wren? सबै तपाईंले यो songbird बारेमा जान्नु आवश्यक छ
एक्ससेलबाट शब्दलाई कसरी Word लाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बारेमा
यो जडिबुटी स्टेटजोन्स wort। तयारी र आवेदन: मा स्टेटजोन्स wort tincture
ROE - आदर्श र आदर्श माथि
कालो ज्याकेट - extravagant नङ कला डिजाइन
"Carpathians" - छुट्टी को लागि एक केक